Ha’ayada war faafinta ee itoobiya ayaa uga digtay war baahinada baraha bulshada ee kala duwan in hadii shrciga ay so saartay ha’ayadu ku dhaqmi waayaan oo ay is diiwaan galin wayaan ay ka xidhi doonto xafiisyadooda – ዜና ከምንጩ
ትንታኔ 88 0
Ha’ayada war faafinta ee itoobiya ayaa uga digtay war baahinada baraha bulshada ee kala duwan in hadii shrciga ay so saartay ha’ayadu ku dhaqmi waayaan oo ay is diiwaan galin wayaan ay ka xidhi doonto xafiisyadooda
Sida ay ugu warantay ha’ayda war faafinta ee itoobiya wargayska addis maleda ayaa sheegaysa in ay u digtay war baahinada baraha bulshada in ay isku soo diiwan galiyaan xilgi loogu talo galy, hadii aanay sidaasi yeelin se laga xidhi doono xafiisyadooda baraha bulshada.
madaxa ha’ayada war faafinta ee itoobiya mudane Abera oo addismaleda u waramay ayaa sheegay in hadiii wakhtiga is diiwaan galinta ee ay ha’ayadu u qabatay war baahinada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay is ku soo diiwaan galin waayan laga xidhi doono xafiisyadooda.
waxa kale oo u sheegay in shrciga ay ha’ayadu soo saartay kuwa ku dhaqma ay ha’ayadu ku khasbantahay in ay u adeegto, hadana kuwa aan isa soo diiwan galinna ay awood u leedahay in ay ka xidhi doonto war baahinadooda, sida u wargayska addis maleda u soo ogaaday ayaa ah in war baahin kasta oo an u diwaan gashanayn war faafinta aanay ka heli doonin dawlada wax aqoonsi ah oo aanay heli karin faaiidooyin kala duwan.
waxa kale oo u masuulkaasi u sheegay in war baahinadaasi aan diiwan gashanayn aanay dawlada ka helaynin wax ilaalo ah hadii ay soo gaadhan tacadiyaadyo iyo boob, in ay ayagu masuuliyadooda qaadaan oo aanay dawlada waydiisan karin wax caawimo ah.
waxa la sheegay in is diiwaan galintani ay muhiim u tahay in cid kasta oo doonaysa in ay ka hadasho wixii ay doonayso iyo wixii ay dareemaysoba oo aanay marmarsiiyo ka dhiganin xoriyada oo aanay in si sharci daro ah dalka ugu burburinin looga hortagi lahaa.
waxa u intaasi raaciyay in kasta oo ay cid kastaba xor u tahay in ay canbaareeyan cidii ay doonayaan oo ay ka hadlaan wixi ay rabaan, hadana waxa ay ku khasbanyihiin in ay fahmaan in ay iska ilaaliyaan hadalada sharci darada ah ee dhaawacaya shakhsiyada qofka ama wixii dalka dhib ku keeni kara.
asaga oo hadalkiisi sii wata ayaa sheegay in shir ay dhawaan qabsadeen ku sheegay in ay wada hadal la yeelan doonaan war baahinada kala duwan ee baraha bulshada kuwa aan is diiwaan galinin ee wararka baraha bulshada ka sii daayana lagu boorin doono in ay isa soo diiwaan galiyaan, hadiise ay sidaasi yeeli waayan in dawladu aysan siin doonin wax aqoonsi ah oo lagana xidhi doono xafiisyadooda.
waxa kale oo la sheegay marka is diiwaan galintu ay dhamaato hadi ay soo baxaan ha’ayado cusub oo aan is diiwaan galinin ma helayaan fursad ay ku bilaabi karaan hawlahooda.
xiligan xaadirka ahna ha’ayadau waxa ay ku jirta hawsha diiwaan galinta waxaana ay ka qayb galiyeen in ka badan shan iyo sodon ha’ayadood oo sharciyaysan, in kasta oo ay jiraan qaar is diiwaan galiyay oo xuquuqda dalka ilaaliya oo aan sharciga ku xad gudbin ilaaliyana sirta dalka hadana si ay sharciga sidii ugu haboonayd ay ugu dhaqmaan ayaa la ogaysiinayaa.
war baahin kasta wararka ay maalin kasta siidaynayaan waxa ay soo ogaysiiyaan ha’ayada war faafinta ayuu yidhi masuulku.war baahinadu hadii ay ilaalin waayan xalada dalka ka jirta ee dibiloomasiyeed waxa laga xidhi doona xafiisyadooda.
madaxa xidhiidhka arimaha dawlada ee ha’ayada sida u hadalkiisa ku cadeeyay ayaa ah in ay ha’ayada war faafinta dalku xiligan xaadirka ah wra baahinada kala duwan wakiiladooda ay kala shirayso arintan.
waxa u masuulku wargayska addis maleda u usheegay in todobaadki hore hudheelka inter kontinenental ay shir kula yeesheen wasaarada arimaha dibada, masuuliyiin ka socotay ciidanka iyo wasaarada gaashaan dhiga. Oo ay kala xaajoodeen Sidii arimaha la xidhiidha in mudnaanta dalka la siiyo iyo danaha shacbiga loo ilaaliyo in kaalintaooda looga baahanyahay ay ka soo baxaan.
አዲስ ማለዳ Nahaase 22 2013 No 9
Total views : 6422167